သင်၏ Whattsapp တွင်သူလျှိုလုပ်သော Android Alert, BallonPop2လျှောက်လွှာ Androidsis
Android သတိပေးချက် - BalloonPop2ဂိမ်းကိုသတိပြုရန်မှာ Whattsapp spy app ဖြစ်သည်
Francisco Ruiz | | Android application များ, Android ဂိမ်းများ, လုံခွုံရေး
ဝက်ဘ်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် ၀ က်ဘ်မှဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ကတိပေးထားသောဤစာမျက်နှာကိုကျွန်ုပ်တွေ့ခဲ့သည် whattsapp ပြောဆိုမှုများ ကျွန်တော်၏လျှောက်လွှာကို install လုပ်ခဲ့ကြရသောတယ်လီဖုန်းနံပါတ်၏ BallonPop ၂.
ဤလျှောက်လွှာသည်အဆင်ပြေစွာရှိပြီးဖြစ်သည် Play စတိုးမှငွေထုတ်ခြင်းကျွန်ုပ်တို့ထင်သော်လည်း၎င်းသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့်တပ်ဆင်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိနေသေးသည် နေ့ရက်များကိုရေတွက်လိမ့်မည်ဟု ထည့်သွင်းစဥ်းစားပါက အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဇာတ်ကောင် ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်လျှောက်လွှာ၏။
ငါတို့ Whattsapp စကားပြောဆိုမှုတွေကိုသူတို့ဘယ်လိုထောက်လှမ်းနိုင်သလဲ။
ဝဘ်၏လုပ်ဆောင်မှုသည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီး၎င်းသည်ကြိုတင်လိုအပ်ချက်တစ်ခုပါဝင်သည် BallonPop2ကိုဒေါင်းလုပ် ချ၍ တပ်ဆင်ပါ ငါတို့သည်သင်တို့၏စကားပြောဆိုမှုအပေါ်စူးစမ်းချင်သော Android terminal တွင် နင်.
ဒီ application ကို install လုပ်ခြင်းအားဖြင့်မကြာသေးမီအချိန်အထိမည်သူမဆိုရရှိနိုင်ပါသည် Android Play စတိုးလိုအပ်သောခွင့်ပြုချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့လက်ခံပါသည် BalloonPop ၂ ဤပြောဆိုမှုများကိုရည်ညွှန်းသည့်အချက်အလက်များကိုပေးပို့ပါ နင် application ၏ကိုယ်ပိုင်ဆာဗာများကိုမည်သည့်နေရာမှ web သို့ပေးသည် ကွမ်းခြံကုန်း သင်၏ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်ဖြန့်ဝေရန်တာဝန်ရှိသည်။
ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို၏ရာဇဝတ်မှုသူတို့တတ်နိုင်သမျှသောကွောငျ့ဖွစျသညျ မည်သည့်ဖုန်းနံပါတ်မှစကားပြောဆိုမှုများတောင်းခံပါ ၎င်းသည်တောင်းဆိုသူအသုံးပြုသူ၏မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းမရှိပဲဒေတာဘေ့စ်ကိုယ်နှိုက်တွင်ပါ ၀ င်သည်၊ သင်တောင်းဆိုထားသောအချက်အလက်များကိုသင့်ထံသို့ပေးပို့နိုင်စေရန်အထက်ဖော်ပြပါဂိမ်းကိုသာတပ်ဆင်ထားရမည်။
ဂိမ်းလည်ပတ်ပြီးပြီဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အားတိုက်ရိုက်အကြောင်းကြားရန်သတိပေးစနစ်ရှိသည် အဆိုပါပြောဆိုမှုများများ၏မိတ္တူ တောင်းဆိုထားသောဖုန်းနံပါတ်၏။
အကယ်၍ သင်ကဂိမ်းကိုအကြံပြုသောအသုံးပြုသူများထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်လျှင်အကြံပေးလိုပါသည် BallonPop ၂, ချက်ချင်းဖယ်ထုတ် သင်၏စကားပြောဆိုမှုမိတ္တူတစ်စုံတစ်ရာရှိမလားသိရန် WhattsappCopy ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ သွား၍ သင်မသိလိုက်ဘဲသင်၏အခြေခံအကျဆုံးအခွင့်အရေးများအနက်တစ်ခုမှာချိုးဖောက်ခံရပြီးဖြစ်သောကြောင့်သင့်လျော်သောတိုင်ကြားချက်ကိုပြုလုပ်ရန်အတွက်ဝက်ဘ်သို့ပြေးပါ။ privacy ကိုပိုင်ခွင့်.
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - လုံခြုံရေးသတိပေးချက်!, အန္တရာယ်ရှိတဲ့ကြော်ငြာသတိနှင့်ကြဉ်ရှောင်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » လုံခွုံရေး » Android သတိပေးချက် - BalloonPop2ဂိမ်းကိုသတိပြုရန်မှာ Whattsapp spy app ဖြစ်သည်
Android ကိုသတိရပါ: MIUI Music Player ဗားရှင်း ၁.၀
Oppo Find5Launcher နှင့်၎င်း၏မယုံနိုင်စရာနောက်ခံပုံများကို Download လုပ်ပါ